Dhaladayada quruxda badani waa weel wanaagsan oo loogu talagalay aalkoladaada, dhalooyinkayaga waxaa lagu samayn karaa walxo cadcad iyo cad cad sare, wareeg wax soo saar dhakhso leh, tayo wanaagsan, waxaan nahay hogaamiyaha warshada dhalada, waxaan dammaanad qaadaynaa tayada. Dhalooyinkaan dhalada ah ee dhagaxa weyn leh waa kuwo casri ah oo adag. Si fudud loogu qaado xafladaha, taariikhaha, jimicsiga ama shaqada. Ha ka baqin inaad aado meel kasta. Dhalada midabkeedu wuu cad yahay, waana cad yahay. Xayndaabku waa mid dhalaalaya oo dhalaalaya. Waxyaabaha - waara ...